China Zmte ọbọp ego haịdrọlik sooks rụpụta na Factory | Topa
Hydraulic sooks Dabara Adaba
Metric Hydraulic Dabara Adaba
British Hydraulic Dabara Adaba
American Hydraulic Dabara Adaba
Otu Ibe sooks Dabara Adaba
Reusable Hydraulic Dabara Adaba
Flange nke Hydraulic
Ndị ọzọ sooks Fittings
Ihe nkwụnye ọkụ eletrik
Adapị Hydraulic America
Hydraulic sooks Machine
Ngwaọrụ PCgun Airgun
Njikọ Teknụzụ metụtara
Zmte ọbọp ego haịdrọlik sooks
Nodị No.: R15
Ihe: Silicone Rubber, PP
Ikike: Okpomọkụ na-eguzogide Rubber sooks
Agba: Black, Black / ọbara ọbara / acha anụnụ anụnụ / edo edo
Okpomọkụ: -30 Ruo 90 Ogo
Ogologo: 2m / 50m Ma obu Dika I choro
Nọmba nlereanya: Di iche iche
Adabara sooks: 8-10 Mm N'èzí dayameta
N'ime tube: Mmanụ Na-eguzogide
Ojiji: Chebe sooks
Akwụkwọ: ISO9001: 2008
Aha: Ego Hydraulic sooks
Nkwakọ ngwaahịa: katọn na osisi osisi
Arụpụta: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Gbọ njem: Oke Osimiri, Ala, Ikuku, DHL / UPS / TNT
Tụkwasịnụ Ikike: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Akwụkwọ: Hydraulic sooks ISO
Zmte ọbọp ego Hydraulic sooks
Ego haịdrọlik sooks na-akachasị eji mee ihe na nkwado mịịdrọlik, nyocha mmanụ, nke kwesịrị ekwesị maka injinia ihe owuwu, ụgbọ njem kreenu, ịkpụzi metallurgy, akụrụngwa akụrụngwa, ụgbọ mmiri, ịkpụzi ịkpụzi akụrụngwa, igwe ọrụ ugbo dị iche iche.
Ego haịdrọlik ego - Esịtidem sooks
Substratum nke sịntetik roba na-eguzogide ọgwụ mmanụ.
Ego haịdrọlik ego - Mkwado
1 nwunye nke igwe na-eguzogide ọgwụ dị elu, 2braide ma nwee okpukpu anọ nke waya
Ego haịdrọlik ego - Na-ekpuchi
Black sịntetik roba roba eguzogide ọgwụ abrasion, mmanụ, fuels, ozone, ikuku mmadụ.
site -40 Celsius ruo + 100 Celsius
NJ sooks Oghere OD Nrụgide Ọrụ Burst Pressure Opekempe gbagọrọ agbagọ okirikiri Ibu ibu
5/8 Ogbodo 15.9 30.2 41.4 6000	 165.5 24000	 254	 1.31
1	 25.4 42.9 41.4 6000	 165.5 24000	 330	 Ugboro abụọ
1-1 / 4 31.8 51.5 41.4 6000	 165.5 24000	 444	 Ogbe 3.57
1-1 / 2 38.1 Ogbe 59.6 41.4 6000	 165.5 24000	 533	 4,98
2	 50.8 Ogbe 73.5 41.4 6000	 165.5 24000	 762	 7.06
Ego haịdrọlik ego a ga - eji nyefe mmiri mmiri hydraulic dị mmanụ mmanụ, mmanụ mmanụ, mmanu mmanu, emulsion mmiri, hydrocarbon na nwa iji bufe mmiri dị elu na hydraulic na-agbanwe maka ọrụ injinịa nke ọnọdụ okpomọkụ bụ -40 ℃ ~ + 100 ℃.
Companylọ ọrụ anyị enweela ngwa ọrụ nke esila na South Korea, Finland na Italytali, gụnyere igwe dị gburugburu, igwe na-akpụ akpụ, igwe na-emepụta ihe na ngwa ọrụ ndị ọzọ dị egwu. Nakwa nnwale nnwale, nnwale nnwale na ngwa ọrụ nyocha ndị ọzọ dị elu.
Anyị na-emepụta ngwaahịa ndị na-ezute SAE na DIN ụkpụrụ ụwa na ogo dị elu. E resịla ngwa ahịa n'ọhịa dịgasị iche iche gụnyere mmanụ mmanụ, ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ̀ ndị dị n'ime ala, ọlaọcha, injinia, na igwe. Parts e exported ka America, Russia, Canada, Argentina na ọtụtụ mba ndị ọzọ.
Ihe ngwugwu izugbe discount haịdrọlik sooksbụ plastic ma ọ bụ kpara akpa na pallet n'okpuru sooks, nke a pụrụ ịhụ n'okpuru. Anyị, anyị nwekwara ike ịnye ngwugwu pụrụ iche dịka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Nke anyi discount haịdrọlik sooks na-emepụta nditịm dị na mba ọkọlọtọ.
1.Using akwa-mma roba, n'ime liner bụ na ezi ikuku impermeability, na mkpuchi nwere oké okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ na mgbochi ịka nká arụmọrụ.
A na-eji akwa polyester na-eme akwa mkpuchi ọzọ ma ọ bụ na-agbagọ agbagọ.
3.Arụ ọrụ okpomọkụ: -40 ℃ -160 ℃
4.Executed ọkọlọtọ: GB / T25
5.Ọ bụ gburugburu ebe obibi, ọ dịghị onye mmetọ na gburugburu ebe obibi.
6. Nwere Technology Dept,
8.Sample na usoro ikpe dị
1. OEM dị?
Ee, OEM dị. Anyị nwere ọkachamara mmebe-enyere gị ika nkwalite.
2. Enwere ihe nlele?
Ee, samples dị ka ị nwalee quality.If anyị nwere n'omume na nkwakọba, ibu nwere ike-akwụ ụgwọ site na gị n'akụkụ
3. Ibu onye na emeputa ihe?
100% emeputa, Nnọọ na ị gara anyị mmepụta akara.
4.Gịnị bụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ gị maka iwu?
T / T 30% dị ka nkwụnye ego, na T / T 70% itule kwụrụ ụgwọ tupu itinye.
Ma ọ bụ okwu ịkwụ ụgwọ ọ bụla iji kwurịta.
Olee otú Iji Kpọtụrụ Anyị?
Na-achọ ezigbo ego Hydraulic Hose Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Zmte Discount Hydraulic Hose na-ekwe nkwa dị mma. Anyị bụ ndị China Original Factory nke ọbọp Discount Hydraulic sooks. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa: Hydraulic Hose
Nke gara aga: Na-egbuke egbuke 300bar 25mm manometer maka PCP Compressor
Osote: 16711 Igwe anaghị agba nchara barbed brek sooks oyiyi akwa
Hydraulic ulo oru parker sooks nkwụnye njikọ
Rubber mgbanwe anwụrụ parker haịdrọlik sooks na ...
Mmanụ akara elu nsogbu roba haịdrọlik sooks p ...
Igwe anaghị agba nchara mgbanwe elu nsogbu hydrauli ...
Elu okpomọkụ Ezigbo Mkpa roba sooks
High mgbali mgbanwe roba haịdrọlik sooks anwụrụ
12th Ft, East New World Central Building, No.118 Zhongshan Road, Shijiazhuang, Hebei Province, China, Shijiazhuang, Hebei